Soo Iibso Kiniiniyada Ejaculation Premature Kuwa Ugu Hooseeya $ 5 & Bilow galmo aan xad lahayn
Waa maxay biyo baxa degdega ah?
Marka xubinta taranku biyo baxdo, asal ahaan waxay ubaahantahay laba ficil oo isdaba joog ah inay dhacaan: marka hore waa soo saarid ka dibna cayrin. Sayniska caafimaadka wuxuu rumeysan yahay in serotonin neurotransmitter-ka uu mas'uul ka yahay isbadal ku yimaada shahwada. Heerarka aan ku filnayn ee serotonin ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin sababaha suurtogalka ah ee biya baxa degdega ah.
Marka biya baxa deg degga ah uu ku dhaco nin, waxay noqon kartaa mid aad u xishood badan, ceeb ah oo ka dhigeysa inuu dareemayo inuu ka yar yahay ragga. Waxay xitaa dhaawici kartaa xiriirka sababo la xiriira qanacsanaanta lamaanahooda. Haddii ay kugu dhacdo adiga, ha ka welwelin, waa cabasho guud oo ragga ka dhex jirta, gaar ahaan ragga da'da yar. Tirakoob ahaan, PE wuxuu saameeyaa 25% -40% ragga Mareykanka gudihiisa. Xaqiiqdii, ragga badankood waxay la kulmeen ugu yaraan hal jeer kulankooda galmada. Waxay badanaa dhacdaa horaantii xiriirka, walaaca iyo kicinta darteed.
Haddii nin si rasmi ah looga ogaado cudurka soo noqnoqda ee PE, rajada oo dhan lama lumiyo. Hagaajinta iyo tababbarka habdhaqanka maskaxda si loo horumariyo xakamaynta kicinta inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa galmada ayaa hadda loo adeegsadaa daaweyn loogu talagalay PE. Waxaa jira daawooyin horey suuqa ugu jiray sikastaba ha noqotee kuwaas oo sidoo kale la adeegsado. Sida hadda Dapoxetine waa daroogada kelida ah ee leh rukhsad sharciyeyn ah oo loogu talagalay daaweynta cudurka rasmiga ee loo yaqaan 'PE', laakiin hadda wuxuu weli ku jiraa marxaladda tijaabada ee Mareykanka iyo waddamada Yurub.
Biyo bax deg deg ah ayaa sababa: maxaa sababa biya baxa degdega ah?
Su’aasha jah wareersan ee ah waxa keena biya baxa degdega ah waa midka ka gudba maskaxda ragga badan. Waxaa jiri kara arrimo badan oo kala duwan oo sababa PE: dhalinyarada, arrimaha nafsaaniga ah, arrimaha caafimaadka, iwm. Marwalba ma fududa in la tilmaamo waxa dhabta ah ee sababa arrimahan nin laakiin, waxaan rajeynayaa, ka dib baaritaanka macluumaadka aan soo uruurinay, adiga Waxaan fikrad fiican ka heli doonaa sababaha keena PE ee adiga kugu saameeya.
Waxaa jira arrimo badan oo kala duwan oo laga fiirsado marka la isku dayayo in la ogaado waxa ka masuulka ah PE ee adiga ama lamaanahaaga. Waxaan ka wada hadli doonnaa sababaha ugu badan ee ku yaal boggan waxaanan isku dayi doonaa inaan xoogaa aragti kaa siino xaaladdan jahwareerka leh.
Arimaha Walaaca: Markii la isku dayayo in la ogaado sababaha keena biya baxa degdega ah, rag badan ayaa ogaada in walwalka uu yahay sababta ugu weyn. Tani waa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee keena in ragga ay yeeshaan arrimaha biyo bax. Asal ahaan, waad ogtahay inaad galmo sameyn doontid oo aad walwalsan tahay. Waad walwalsan tahay sababtoo ah waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad qancisay lammaanahaaga ka hor intaadan dhicin. Walwalkaani (inta uu ka imanayo ujeedooyinka wanaagsan) wuxuu u xun yahay maskaxdaada guud ahaaneed, ugu dambeyntiina, dabeylo ayaa kuu keenaya arrimahaaga PE. Welwelkaagu wuxuu kugu keenaa inaad si deg deg ah u biyo baxdid. Tani waxay u horseedaa walaac badan taas oo keenta arrimo badan. Waxay noqon kartaa wareeg aad u jahawareer iyo is-qiimeyn dhaawac ah. Warka fiicani waa inaad ka adkaan karto arrimahaaga walaaca leh ee la xiriira galmada. Warka xun ayaa ah inay qaadato waqti. Waxaad ubaahantahay inaad dib u eegis ku sameyso maskaxdaada iyo jirkaaga si aad u gaabiso, aad uga adkaato welwelka oo aad ugu raaxeysato galmada. Macluumaad weyn oo ku saabsan la macaamilka walaaca, raac xiriirka hoose.
Arimaha Ciqaabta: Dambiga, sida walwalka, waa mid ka mid ah arrimaha ugu caansan ee ku saabsan PE. Dembigu wuxuu u shaqeeyaa sida walaaca isla wareegga: Waxaad leedahay dambi sabab u ah xaqiiqda ah inaad leedahay arrimaha PE ee sababa walwal iyo walaac taas oo kuu keenta inaad xilli hore shahwooto. Waa meerto ay tahay in la jabiyo. Waxaad u baahan tahay inaad wax ka qabato dembiga oo aad barato sida loo xakameeyo arrimahaaga.
Heerka Khibrada: Heerkaaga khibradeed ee galmada wuxuu noqon karaa sababta ugu weyn ee aad u leedahay arrimaha biyo-baxa. Ragga leh khibrad yar xagga galmada waxay u janjeeraan inay yeeshaan arrimo biyo bax degdeg ah. Sababtani waxaa badanaa laga helaa ragga da'da yar ee aan daruuri galmo u lahayn sida qof waxyar ka bisil. Shaqsi ahaan khibrad ahaan xagga galmada ah, waa wax caadi ah inaad si xamaasad leh uhesho oo aad dhaqso u timaado.
Farsamooyinka Siigaysiga: Farsamaynta siigaysigu badanaa waxay u horseedaa dhibaatooyinka PE. Asal ahaan, haddii aad si dhakhso leh u soo dhaweyneyso markaad naftaada ka farxineyso, waxaad la kulmi doontaa waqti adag oo waara adiga iyo lammaanahaaga waqti qumman. Nasiib wanaag adiga, tani waa arrin sahlan oo wax laga qabanayo. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad bilowdo kordhinta waqtiga aad masturbateyso. Haddii aad naftaada u keento ugu dambeyn daqiiqad, tag laba daqiiqo. Markaad hoos u dhigto, isku day afar daqiiqo. Runtii wax badan ayaad ka baran kartaa waxyaabaha kiciya galmadaada adoo adeegsanaya farsamooyinka siigaysiga. Layligani waxay kuu oggolaanayaan inaad ku aragto guulo waaweyn qolka jiifka si deg deg ah.
Arimaha Xiriirka: Ma waxaad la dagaallameysaa xaaskaaga / saygaaga? Ma leedahay doodo saameyn ku yeelanaya xiriirkaaga? Hadday sidaas tahay, xiisaddan waxay sababi kartaa dhibaatooyin xagga galmada ah oo ku yimaada xiriirkaaga. Markaad la dagaallameysid saaxiibadaa, xaaskaaga, lammaanahaaga, iwm, shucuurta, xiisadaha iyo heerarka walaaca waa la wada sarreeyaa. Tani waxay u horseedaa walwal iyo farxad la'aan qolka jiifka. Haddii aad hadda haysato dhibaatooyin xiriir markaa xaaladdaani waxay umuuqataa mid adiga kugu caan ah: waad dagaallameysaa, waad “qurxinaysaa,” waad galmoodaysaa. Si kastaba ha noqotee, waad ogtahay in "qurxinta" ay tahay mid kumeelgaar ah sidaa darteed weli waad kacsan tahay oo waad walwalsan tahay markaad galmo sameyneyso. Tani waxay kaa hor istaageysaa inaad nasato waxayna kugu keeneysaa inaad si deg deg ah u biyo baxdid.
Hiddo-wadayaal laga dhaxlay: Ma ogtahay in hiddo-wadahaaga aad dhaxashay uu sababi karo biya bax deg deg ah? Waa run! Rag badan oo la ildaran cudurka PE waxay ogaadaan in aabayaashood ay sidoo kale ku dhacday isla xaaladdan. Saynisyahannadu waxay aragti ahaan u dhigayaan dhacdada soo socota: Waxaa la rumeysan yahay in 1000s sano ka hor, godadleyda ay soo saareen jawaab degdeg ah oo biyo bax ah taasoo ka caawisay inay sii noolaadaan. Aragtidu waxay tahay in ninkii godka lahaa ee sida ugu dhaqsaha badan u biyo baxay uu ahaa kii ay u badnayd inuu ku noolaado iyada oo ay ugu wacan tahay tiro badan oo carruur ah. Sida laga soo xigtay saynisyahannada, galmada xilliyadan waxay ku saabsanayd badbaado iyo raaxaysi. Ujeeddada ugu weyn ee galmadu waxay ahayd in uur la yeesho oo laga soo horjeedo in lagu raaxeysto raaxada. Haddii aad aamminsan tahay iyo haddii kaleba aragtidan adigaa iska leh. Warka fiicani waa inaadan u oggolaan genetics inay xukumaan noloshaada galmada. Raac xiriirka hoose si aad u qabato arrimahaaga biya baxa degdega ah.
Qalitaanka Kacsiga (ED): Rag badan ayaan garanayn tan laakiin, marar badan, cillad kacsi waxay keentaa PE. Haddii aad soo jeeday meel kasta oo ka mid ah 15-kii sano ee la soo dhaafay, waxaad aqoon u leedahay erectile dysfunciton (ED). Waxaa naloo duqeeyey ganacsi ka dib markii ganacsi ku saabsan mowduucan. ED wuxuu sababa PE sababtoo ah walaac iyo kalsooni la'aan. Dareennadani waxay la xiriiraan ED waxayna si toos ah ula xiriiri karaan PE. Asal ahaan, nin qaba ED wuxuu bilaabaa ficil galmo laakiin wuxuu aad uga walwalsan yahay inuu sii wado kacsigiisa oo uu ku degdego ficilka taas oo keeneysa in si dhakhso leh loo gaaro.
Dhibaatooyinka qanjirka 'Thyroid': Arrimaha PE iyo tayroodhka lama darsin ilaa dhawaa. Kadib, 2006, dhakhaatiirtu waxay daabaceen daraasad lagu baaray xiriirka ka dhexeeya arrimaha qanjidhada tayroodhka (hyper iyo hypothyroid) iyo biyo baxa degdega ah. Waxa ay heleen waxay ahayd in ragga qaba dhibaatooyinka hypothyroid ay leeyihiin dhacdo aad u hooseysa oo ku saabsan arrimaha biyo-baxa. Si kastaba ha noqotee, ragga qaba dhibaatooyinka 'hyperthyroid', 50% waxay qireen inay la kulmeen dhibaatooyin biyo bax xilli hore noloshooda. Haddii aad u maleyneyso in qanjirkaaga jirka uu sabab u yahay dhibaatooyinkaaga PE, waa inaad la tashataa dhakhtarkaaga.
Arimaha Hormoonka: Mararka qaarkood, arrimaha hoormoonka waxay sababi karaan PE iyo dhibaatooyinka galmada. Markaad sii gabowdaba, heerarka testosterone ee jirkaaga wuxuu soo saaraa dhibco kuwaas oo saameyn taban ku yeelan kara istaagaaga. Heerarka hoose ee DHEA iyo testosterone ayaa la muujiyey inay yihiin mid ka mid ah dembiilayaasha ugu muhiimsan ee jir ahaaneed ee la xiriira biya baxa degdega ah. Haddii aad u maleyneyso in cillada hoormoonka ay kuu keenayaan dhibaatooyin biyo bax, waxaan kugula talin lahaa inaad la hadasho dhakhtarkaaga. Waxaa jira waxyaabo badan oo dheeri ah oo dheeri ah oo testosterone ah oo la heli karo, dhakhtarkaaguna wuxuu lahaan lahaa fikradda ugu fiican ee midka sida ugu fiican ugu shaqeyn doona
Guud ahaan, kuwani waa dhibaatooyinka ugu caansan ee la xiriira PE. Fahamka sida arrimahan ay kuu saameynayaan una horseedaya xaaladdaada caafimaad ee 'PE' ayaa muhiim u ah xallinta dhibaatada.
Daaweynta biya baxa degdega ah: sidee loo daaweeyaa biya baxa degdega ah?
Inaad kala hadasho takhasusahaaga daryeelka caafimaadka dhibaatooyinkaaga dhow waxay noqon kartaa talaabada ugu horeysa ee lagu garaaco xaalada. La hadalka dhakhtar ama dhakhtar ayaa kaa caawin kara inaad dareento xasilooni waxaana laga yaabaa inay kuu tilmaami karaan jihada saxda ah marka la eego jimicsiyada ama daawooyinka kaa caawin kara xakameynta biya baxa dhiciska ah. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka fikirto wixii su'aalo ah ee aad jeclaan lahayd inaad weydiiso dhakhtarkaaga ka hor intaadan galin, si loo hubiyo inaad weydiiso wax kasta oo aad rabto.
Haddii aad raadineyso daaweynta ugu dhakhsaha badan ee biyo-baxa, markaa waxaad u baahan doontaa inaad tixgeliso macluumaadka soo socda.
Waxaa jira dhowr dariiqo oo loo maro daaweynta biya baxa dhiciska ah. Waagii hore, dhakhaatiirtu waxay aaminsanaayeen in xaaladani tahay mid maskaxeed ama mid nafsaani ah, laakiin maanta xirfadlayaasha caafimaadku waxay ogaadeen in xaaladdu aad uga sii adag tahay tan.
Waxay ku lug leedahay dhinacyada jireed iyo nafsadeedba oo si weyn wax uga geysan kara dhibaatada. Xaaladaha badankood, ragga u taga dhakhtar waxaa loo qori doonaa daawo waxaana lagula talinayaa inay ka shaqeeyaan jimicsiyada qaarkood sidii daaweyn biyo bax oo dhicis ah.
Qaar ka mid ah kaniiniyada inta badan la isticmaalo, buufinta buufinta, iyo alaabooyinka kale ee looga hortagayo biya baxa degdega ah Waxaan hoos ku taxnay qaar ka mid ah xulashooyinka ugu caansan:
Waxaa jira dhowr daawo oo kala duwan oo loo isticmaali karo daaweynta xaaladda; mid ka mid ah kuwa ugu cusub ayaa ah dapoxetine. Tani waa wax cusub oo wali ay tijaabinayso FDA. Daraasadihii ugu dambeeyay ayaa xaqiijiyay in bukaanada qaata kiniiniyada ay ogaadeen horumar muuqda. Dhibaatooyinka soo raaca ee dawadani waxaa ka mid ah lallabbo iyo madax xanuun, in kasta oo saamayntu caadi ahaan fudud tahay.
Waxa kale oo jira kiriimyo kala duwan oo miyir beeliya; kuwani waxaa loo isticmaalaa in guska laga dhigo mid xasaasi ah. Tani waa mid waxtar leh maxaa yeelay haweenka waxay ku qaadataa waqti dheer inay gaaraan orgaaska marka loo eego ninka. Xalalka jilicsanaanta ayaa laga heli karaa looshinnada, kareemada ama buufinta waana inay awoodaan inay kordhiyaan waqtiga galmada ka hor inta aan la biyo bixin. Si kastaba ha noqotee, haddii tan loo isticmaalo kondhom la'aan markaa waxay sidoo kale kabuubi kartaa dareenkooda taasoo sababi karta dhibaato intaas ka weyn.
Waxa kale oo jira dawooyin qaar sida Prozac iyo dawooyin kale oo ka hortaga murugada oo hoos u dhiga biya baxa oo ka mid ah waxyeelada ay keenaan. Kuwani waa faa'iido sababtoo ah qiyaas yar ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale uma baahnid inaad maalin kasta qaadatid kuwan, kaliya qaadashada qadar yar ka hor intaadan galmoodin waa inay badataa. Daraasadihii ugu dambeeyay waxay soo jeediyeen inay u shaqeyso oo keliya 39% bukaannada la baaray. Waxa kale oo jira waxyeelooyin badan, oo ay ka mid yihiin u janjeedha is dil, shuban, hurdo yaraanta iyo suurtagalnimada qabatin.
Viagra sidoo kale waa la isticmaali karaa waana ku guuleystaa bukaanada qaar. Qalabkan kor u kaca ee daroogada dhammaantood waxay u muuqdaan inay dib u dhigayaan biya baxa. Si kastaba ha noqotee, kaniiniyadan looma oggola ujeedadaas sidaas darteed helitaankooduna wax yar buu noqon karaa.
Ka-hortagga biyo-baxa degdegga ah: sida looga hortago biyo-baxa degdegga ah?
Waad ka ogtahay wax walba oo ku saabsan xaaladan iyo waxa ku jira, laakiin sidee u joojineysaa? In ka badan qarniyo - haa, waad maqashay sax, qarniyo - ragga adduunka oo dhan waxay ikhtiraaceen habab ay ku joojiyaan PE jidadkooda, iyagoo leh guul aad u yar. Maanta raggu waxay helayaan guul intaa ka sii badan oo ay ugu wacan tahay sayniska. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha looga hortago biya baxa degdegga ah si dabiici ah oo wax ku ool ah.
Hal dariiqo oo caan ah oo looga hortago biya baxa goor hore waa isticmaalka kondhomka. Kondhomku wuxuu ku fiican yahay galmada aaminka ah, ka hortaga uurka iyo STD's, waxayna leeyihiin faa iidooyin dheeri ah oo ah inay yareeyaan xasaasiyadda xubinta tarankaaga xilliga galmada, taas oo ah hab wanaagsan oo looga hortago biya baxa degdega ah.
Qaab kale oo fudud laakiin wax ku ool ah oo looga hortago biyo baxa goor hore waa adigoo siigaysanaya saacad ama labo kahor galmada. Tani waxay ka dhigeysaa mid aad u adag in la gaaro ugu dambeyntii waqtiga xiga, taas oo kaa caawinaysa inaad ka hortagto biya baxa hore. Haddii aad isku darto labadan qaab dhowr farsamooyin waxaad awoodi kartaa inaad xitaa ku sii dheeraato sariirta.
Habka ugu fudud ee loo joojiyo biya baxa degdega ah waa iyadoo la badalo hababka. Hadaad dareento inaad udiyaar garoobeyso inaad dhameystirto inta lagu gudajiro galmada, si dhaqso leh u jooji galmada oo adeegso seddexdan xeeladood midkood
Adeegso wareegto, dhaqdhaqaaq gaabis ah. Waad joojin kartaa ugu dambaynta adoo beddelaya istaroogyadaas. Halkii aad u isticmaali lahayd istaroog joogto ah, isticmaal wareegyo, istaroog gaabis ah halkii. Tani waxay diirada saareysaa dareenka ka soo baxa guskaaga (caarada guska) ilaa guskaaga oo dhan, taas oo ka kicin yar.
Beddel jagooyinka. Weydii lammaanahaaga inuu beddelo boosaska. Xagasha kaladuwan waxay joojisaa kicinta hadda jirta ee guska 'wayna ku wareerisaa'.
Ku jiido Adigu waxaad gacanta ku joojin kartaa ugu dambeyntii adoo adeegsanaya guskaaga. Markaad dareento inaad naftaada gaadhay heerkii ugu dambeeyay, ka bax lammaanahaaga oo foorari xaakadaada. Xuubku wuu adkeeyaa wuuna kordhaa marka la filaayo ugu dambaynta, si loo kululeeyo kalluunka ka hor intaan kor loo qaadin, si loo hadlo. Adoo hoos u jiidaya, waxay joojineysaa howshaas inay dhacdo.
Ka gudubka dhibaatooyinka biya baxa degdega ah waxay qaadan kartaa waqti iyo tababar. Waa muhiim inaad daacad u ahaatid lamaanahaaga oo aad ka hadasho shucuurtaada. Wadaagida kalsoonida iyo naxariista waxay gacan ka geysan doontaa xallinta dhibaatooyinka waxayna kor u qaadaysaa isu soo dhawaanshaha. Haddii aad ogaato in dareenkaaga degdegga ah ee biyo-baxa uusan soo fiicnayn, maskaxda ku hay in caawimaadda ay gacanta ugu jiraan xirfadlayaal ku takhasusay galmada.